Fomba fanelanelanana ho an'ny mpihazakazaka | Nutri Diet
Ahoana ny fomba hanombohana mihazakazaka nefa mbola tsy nihazakazaka mihitsy ianao
Raha nanandrana lasa mpihazakazaka ianao nefa tsy nahomby, Alohan'ny hilavoana, diniho ny fampiharana an'io fomba io., voalaza fa manomboka mihazakazaka rehefa mbola tsy nanao mihazakazaka.
Natolotra manokana ho an'ny olona mihoatra ny 50 taona izay mbola tsy nihazakazaka lavitra mihitsy, fa te hahazo endrika amin'ny alàlan'ity fanatanjahantena malaza ity.
Tsotra ny fomba: mihazakazaka, mandeha sy mihazakazaka fohy, fotoana fohy. Ny faharetan'ny elanelam-potoana voatondro farany dia 30 segondra (0:30 mihazakazaka / 0:30 mandeha) ary farafahakeliny 15 segondra (0:15 mihazakazaka / 0:15 mandeha).
Atombohy amin'ny halavirana izay mahazo aina anao ary andramo ampitomboina rehefa mandeha ny herinandro. Ny tsiambaratelo dia ny fampiasana ny fomba elanelam-potoana ho an'ny elanelana rehetra: mihazakazaka, mandeha, mihazakazaka… mihazakazaka, mandeha, mihazakazaka… Ity manolotra ny vatana ny mety hampitombo ny fanoherana milamina, mandra-pahatonganao any amin'ny haavo ilainao ny mihazakazaka an-kilaometatra maro.
Raha apetrakao ao an-tsainao izany, afaka volana vitsivitsy dia afaka mahavita hazakazaka hatramin'ny 10 kilometatra ianao amin'ny alàlan'ny hazakazaka fotsiny. Fa tsy izany ihany. Ny fomba elanelam-potoana dia ahafahana mifehy tsara kokoa ny havizanana ary manakana ny eritreritra ratsy mety hanimba ny fiofanana, hanamaivana ny adin-tsaina ary hampitombo ny fahamailoan'ny saina.
Izy io koa dia manampy anao hanary lanja ho takalon'ny risika somary ambany. Azo antoka, na ny fahasalamana na ny fahasalamana dia samy mandray anjara tsara, izay ilain'ny olona mihoatra ny 50 taona manana fomba fiaina mipetrapetraka fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Ahoana ny fomba hanombohana mihazakazaka nefa mbola tsy nihazakazaka mihitsy ianao
Miadia amin'ny lalan-drà varicose amin'ity alika bitika sy persily ity
Ampifantohy ireto sakafo manaraka ireto ny sain'ny sainao